LEGO Adidas Ultra အသစ်boost သင်တန်းဆရာများကိုယခုအွန်လိုင်းတွင်ရနိုင်သည်
11 / 08 / 2021 12 / 08 / 2021 ဂျက်ယက်စ် 318 Views စာ0မှတ်ချက် 10282 Adidas မူရင်းစူပါစတား, adidas, Adidas မူရင်း, Adidas မူရင်း, Adidas မူရင်း LEGO စူပါစတား, Adidas မူရင်းစူပါစတား, Adidas စူပါစတား, Lego, Lego Adidas, Lego သင်တန်းဆရာ, ဖိနပ်, သင်တန်းဆရာ, ultraBoost
သူတို့ဆက်လုပ်နေတဲ့ partnership, ထို Lego အုပ်စုနှင့် adidas ယခုအုတ်ခဲပုံစံသင်တန်းဆရာများစုစည်းမှုကို p အဖြစ်ထုတ်ဝေခဲ့သည်art Ultra ၏boost လိုင်း။
အုတ်နှစ်ကောင်စလုံးကိုလွှတ်လိုက်ပြီးနောက်တည်ဆောက်လိုက်သည် 10282 Adidas မူရင်းစူပါစတား နှင့်လုပ်နိုင်သောတစ်စုံ သွားရင်းလာရင်းသင်၏အုတ်များကိုကိုင်ထားပါ၊ နောက်ထပ်သုံးတွဲ Lego-inspired ဒီဇိုင်းများကိုယခုအခါ sneaker နှစ်သက်သူများအတွက်နေရာတိုင်းသို့ဖြန့်ချိလိုက်ပါပြီ။
ဒီဒီဇိုင်းသစ်တွေက p နဲ့လာပါတယ်art Ultra ၏boost ၏စီးရီး adidas ဖိနပ်၊ Ultra မှအင်္ဂါရပ်များBoost DNA ကို x Lego ဖိနပ်များကိုဖိနပ်၏ဘေးနှစ်ဖက်၌ဆန့်သောအုတ်သုံးလွှာနှင့်တွဲထားသော်လည်းကျွန်ုပ်တို့၏စင်ပေါ်သို့ဖြည့်ထားသောပုံမှန်ပလပ်စတစ်အစားပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရော်ဘာဖြင့်ပြုလုပ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာသင်သည်ဤသင်တန်းဆရာများထံမှသင်စုဆောင်းထားသောပန်းကန်ပြားများကိုချော်နိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်ဟုဆိုလိုသည်။
လောလောဆယ်အရောင်သုံးရောင်ရနိုင်ပါတယ် adidas ultraboost DNA ကို x Lego အရောင်များ၊ ဤအရာ၌ပုံတွင်ပါသောစုံတွဲနှင့်အတူဖိနပ်များ article သည်မူရင်းမှ staright ယူထားသောဒီဇိုင်းပါ ၀ င်သည် Lego adidas A-ZX စီးရီးသင်တန်းနည်းပြများ။
တူညီသောအပြာရောင်နှင့်အနီရောင်တို့သည်ဖိနပ်၌အရောင်နည်းသောဒီဇိုင်းကိုနှစ်သက်သူများအတွက်အခြားအရောင်များအတွက်ရွေးချယ်ရန်ဖြစ်သည်။ နှင့်မတူပါ ယခင်အတွဲဒါတွေကရောင်းမထွက်သေးပါဘူး တရားဝင် Adidas စတိုး.
သူများထက်ပိုထူးခြားတာကိုရှာနေတဲ့သူတွေ Lego adidas partnership ကိုစိတ်ဝင်စားနိုင်ပါသည် 10282 Adidas မူရင်းစူပါစတားတစ်ဦး artအဝတ်အစား၏အမှုန်အမွှားသည်အုတ်ဖြင့်ပြုလုပ်သည်၊ သို့သော် မင်းအဲဒါကိုဝတ်ဖို့ငါတို့မထောက်ခံဘူး.
← LEGO ကိုနိုင်ခဲ့တယ် Ideas Sonic set တွင် minifigure အပိုဆုပါ ၀ င်ပါသလား။
ထိုနေ့၏အုတ်ပုံ: ရီပတ်ဘလီကန်သစ္စာခံများ →